Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Bariga Afghanistan. – Calamada.com
Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Bariga Afghanistan.
calamada April 25, 2017 2 min read
Wararka laga helayo dalka Afghanistan waxey sheegayaan in weerar naftii hurnimo ah lala beegsaday xarun ciidan oo ku taala gobalka Khowst oo ah gobal dhaca Bariga dalkaasi.
Camaliyaddan ayaa lagu weeraray xarun ciidamada gaarka maamulka daba dhilifka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul ay ku leeyihiin agagaarka garoonka Qadiimiga ah ee ku dhaw xarunta gobalkaasi.
Webseydka Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa baahiyay in camaliyadda uu fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga kaasi oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay bartamaha ka galiyay xeradaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in inka badan Konton isugu jirta saraakiil iyo askar maamulka daba dhilifka ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen camaliyaddaasi’waxaa sidoo kale gabi ahaan burburay dhismihii xaruntaasi ciidan.
Camaliyaddan ayaa lagusoo beegay saacado yar kadib markii uu booqasho Dhuusamasho ah magaalada Kaabul ee xarunta dalka Afghanistan ku tagay wasiirka Difaaca dowlada Nasaarada Mareykanka ninka lagu magacaabo James Mates.
Sidoo kale camaliyaddaan ayaa kusoo aadeysa xilli Afar maalmood kaliya laga jooga weerarkii dhimashada iyo dhaawaca ay ku noqdeen inka badan Shan Boqol oo isugu jirta Sarakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka Afghanistan kaasi oo ka dhacay Waqooyga dalka Afghanistan gaar ahaan gobalka Balakh.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Cali Ghani ayaa xilkii uu hayay ka xayuubiyay wasiirkii difaaca iyo taliyihii ugu sarreeyay ciidanka melleteriga.
Cabdalla Al-Xabiibi wasiirka difaaca ee shaqada laga eryay ayaa qiray in weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Mazaaru Shariif ee gallaaftay nolosha inka badan Labo Boqol oo askari uu ahaa midkii ugu xumaa ee soo mara melleteriga wadankaasi.
Previous: Sawiro+Dhageyso Sheekh Xasan Yacquub Oo Ka Hadlay Xaalada Ceelbuur Iyo Gurmad La Gaarsiiyay Magaaladaasi.
Next: Xaalada Itoobiya Oo Kacsan Iyo Sarkaal Sare Oo La Dhaawacay.